Muusiga xaafadaha Masar - BBC Somali
Muusiga xaafadaha Masar
8 Jannaayo 2016
Bandhig - Muusig cusub ee ka bilowday xaafadaha dadka saboolka ah ay degan yihiin ee magaalooyinka dalka Masar ayaa si weyn ugu baahaya dalalka kale ee dunida carabta.
Si kasta oo ay tahayba, dadka qaar ayaa sheegaya musiga sharqanta weyn ayaa dhiirogalinaya rabshadaha. Wariyaha BBCda ee qeybta carabiga Cali Jamaal ayaa la kulmay dadka ka danbeeya musigaas.
Image caption Heesaha nooca cusub ee maragan
Jid luuq luuq ah oo ku yaala xaafadda Ceynu Shamis ee magaaladda Qaahira ayaa hal dukaan waxaa uu si weyn uga dhex muuqdaa dukaamadda kale.
Dhinac ka mid ah gidaaradda dukaanka ayaa waxaa ku naqshadysan sawiro farshaxan ah , hase ahaatee dhexdiisa ayaa waxaa ka shidan heeso cusub.
Kooxda Samaka ayaa waxay ku mashquulsan yihiin sameynta heeskooda ugu danbeeya ee la magac baxaya Maharagan. Eryga Mahragan ayaa macnihiisu waxaa uu yahay Bandhig, waxaana inta badan lagu tilmaamay heesahan in ay yihiin kuwo sharqan weyn oo waalan oo isugu jira muusig durbaankiisa lagu sameeyay kombutar iyo erayo isku dhafan.
Waxuuna musigani ka bilowday xaafadaha dadka saboolka ah ee magaalooyinka dalka Masar waxuuna ku baahay dunida carabta oo dhan.
Image caption Heesaha Maharagan oo laga maqalayo dhamaan wadooyinka magaalooyinka Masar
Samaka's studio consists of a laptop, a small table and a microphone, with no musical instruments in sight. Isudiyaha Samaka ayaa waxaa oo ka kooban yahay Kombutarka gacanta lagu qaato, miis yar iyo maykarofoon, iyadoo aan wax qalab ah oo muusig lagu qaraaco aysan meesha ka muuqan.
Kamal Agwa, one of the band's singers, stands at the mic, preparing to record a new song. Kamaal Agwa, oo ka mid ah heesaayaasha kooxda ayaa waxaa uu gacanta ku heystaa maykorofoon, waxuuna isku diyaarinayaa in uu duubo hees cusub.
"When a customer comes asking for a unique song, we tailor the lyrics for him so that it includes his name," he says. Waxaa uu sheegay, ' markii uu qof mucaamil ah yimaado oo codsanaya hees u gaar ah, in loo sameynayo oo loogu darayo magaciisa. Iyadoo laga qaadayo lacag yar amaba loogu sameynayo lacag la'aan.'
Qiimaha raqiisk ah iyo soosaarida sahlan ee heesaha Mahragan ayaa waxay ka dhigeysaan mid ay aad u jecleysteen dadka masaarida oo doonaya in ay helaan wax iyaga u gaar ah marka ay qabsanayaan xafladaha, aroosyada iyo xafladaha dhalashada caruurta.
Heesaha Mahragan aayaa xitaa waxaa lagu isticmaalay qaar ka mid ah ololeyntii doorashadii baarlamaanka ee dhaweyd. Rami Ramaada oo ah ninka curiya miraha heesaha ayaa sheegay in uu qoro heeso badan oo uusan xitaa isagu aqoon tiradooda.
Image caption Heesaha cusub ee qabsaday masar
Xaafad kasta oo ku taala dalka Masar ayaa waxaad ka maqleysa Mahragan, iyadoo musigu uu ka yeerayo tasiyada, mooto seddex lugooleyda iyo basaska. Ama jeclaa ama nebaa sina uga baaqsan kartid maqalka musigaas. Critics believe this genre of music has little room for creativity and all the songs sound the same. Dadka dhaleeceeya musigaas ayaa aaminsan in aysan sameynta musigan ku jirin wax hal abuur ah oo heesaha oo dhan ay isku laxan yihiin.
Hani Muhanna oo ay musishida sameyso qaar ka mid ah heesaha loogu jecel yahay dalka masar ilaa iyo laga soo bilaabo 1970meeyadii ayaa waxay tiri,'Musiga noocaan ah wax xusuus ah oo uu ku reebayo ma jiraan fanka, mudo kooban meesha ayaa uu uga bixi doonaa.
In heeskuuu ku baaho baraha bulshada ma aha macnaheedu in uu yahay hees wanaansan. Waxaa u aragnaa wax qariib ah marka fidiyowyo aflagaado ah ay si weyn ugu baahayaan bulshada.'
Marka laga gudbo in heesahaani ay aad caan u yihiin oo loo jecel yahay, dad badan ayaa ku eedeynaya in ay heesahan ay dhiiro galinayaan rabsha
Image caption Heesaha qabsaday dunida carabta oo ka bilowday masar
Miraha heesaha ayaa waxaa ka mid ah ' I tus nooca hubka ah ee aad heysato. Marka aad wax u yeesho, annaa waxaa kaa aargudanayaa, waxaana burburinayaa wajigaaga oo sidii hore ma haan doono. Hadii aad dib u guratana waxaa tahay qof dumar ah oo nin rag ah oo dhab ah ma tihid.'